Koronavilkku Apk Download Ho an'ny Android  | APKOLL
Koronavilkku Apk Download Ho an'ny Android 
Salama daholo, eto izahay miaraka amin'ny fampiharana Android hafa ho anareo rehetra, izay fantatra amin'ny anarana hoe Koronavilkku Apk. Izy io dia fampiharana fitsaboana ara-pahasalamana Android, izay manome fiarovana tsara indrindra amin'ny olona voan'ny Coronavirus.
Araka ny fantatrao, noho ny fiparitahan'ny COVID-19, dia voan'ny virus sy nijaly ny olona erak'izao tontolo izao. Noho izany dia nanome vahaolana samihafa ny firenena samihafa mba hampihenana ny valanaretina. Amin'ny voalohany, ny lockdown no vahaolana tsara indrindra hanapahana ny rojon'ity toe-tratry ny aretina ity.
Saingy noho ny olana ara-bola dia manomboka mivoaka ny tranony ny olona, ​​izay safidy tokana ihany amin'ny krizy finia maharitra. Noho izany, fanamby ihany koa ho an'ny governemanta ny hitantana ny toekarena sy ny COVID. Noho izany, ny firenena samy hafa dia manome izay fara heriny hitantanana.
Any amin'ny firenena sasany, dia omena fotoana isan-karazany ny olona hivoaka ho an'ny biby fiompy. Ka, manolotra i Failandy, ity fampiharana Android ity ho fitaovana fiarovana ho an'ny olom-pirenena. Manome ny sasany amin'ireo endri-javatra tsara indrindra ihany koa izy io, izay ahafahan'ny olom-pirenena mivezivezy am-pilaminana.
Hizara amin'ny antsipiriany momba ity fampiharana ity izahay. Raha te-hisintona ity fampiharana ity ianao dia tokony ho fantatrao izany. Koa mijanòna kely eto aminay dia hozarainay daholo izany. Raha manana olana amin'ny fampiasana ity app ity ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Topimaso momba ny Koronavilkku Apk
Izy io dia fampiharana Android, izay novolavolain'ny departemantan'ny fahasalamana sy ny fiahiana ara-tsosialy. Ny tena tanjon'ity fampiharana ity dia ny hampihenana ny fihanaky ny Covid-19 any Failandy. Manome fiarovana sy famantarana ny olona manodidina anao izy io.
Ny Koronavilkku App dia manome fanairana raha misy olona voan'ny aretina eo akaikinao. Mila mametraka ity fampiharana Android ity ianao izay manome ny antsipiriany ilaina rehetra momba anao. Rehefa vita ny dingana dia afaka mivoaka ianao ary mihaona amin'ny olona samihafa, isaky ny misy olona voan'ny virus na misy soritr'aretina.
Hahazo fampandrenesana fampandrenesana ianao, ahafahanao mitazona ny halaviran'ny fiaraha-monina amin'ny olona iray hafa. Tsy fampiharana marina izy io, satria raha tsy mampiasa an'ity fampiharana ity ny olon-kafa dia tsy hahazo ilay fampandrenesana fampandrenesana mihitsy ianao.
Noho izany, raha te hampandeha ity rindranasa ity dia mila mametraka ity rindranasa ity ny tsirairay ary manome famerenana marina. Raha mifanerasera amin'ny olona iray ianao ary aorian'izany dia voan'ny aretina ianao dia afaka manome tatitra tsy mitonona anarana ihany koa, izay hahafantarana azy ireo.
Dingana lehibe iray hafa avy amin'ny sampan-draharahan'ny fahasalamana ho an'ny vahoaka izany. Noho izany, ny fampiasana ity fampiharana ity sy ny fandraisana anjara amin'ity asa tsara ity dia afaka mamonjy ny ain'ny olona. Noho izany, misintona Koronavilkku Apk ary manomboka mampiasa ny rafitra fiarovana tsara indrindra.
Anaran'ny fonosana fi.thl.koronahaavi
Ny sasany amin'ireo fiasa lehibe dia voalaza ao amin'ireo fizarana etsy ambony, saingy misy mihoatra noho izay hitanao ao amin'ity rindrambaiko ity. Izahay dia hizara ny sasany amin'ireo endri-javatra lehibe aminareo rehetra ao amin'ny lisitra etsy ambany. Raha te hizara aminay ny zavatra niainanao ianao dia aza misalasala mampiasa ny fizarana hevitra etsy ambany.
Fomba tsara indrindra hisorohana ny valanaretina
Vaovao farany momba ireo faritra voakasik'izany
Hita ao amin'ny Google Play Store izy io ary zarainay ihany koa. Raha te hampidina azy avy amin'ity pejy ity ianao dia tadiavo fotsiny ny bokotra fampidinana, izay misy eo an-tampon'ny sy ity pejy ity. Tsindrio ny bokotra fampidinana ary miandry segondra vitsy, hanomboka ho azy ny fisintomana.
Koronavilkku Apk no fampiharana fitsaboana Android tsara indrindra, ahafahanao mamonjy ny tenanao ary tianao indray mandeha. Noho izany, mandray anjara amin'ity asa tsara ity amin'ny fampiasana ity app ity. Ho an'ny rindranasa mahavariana misimisy kokoa dia aza mitsahatra mitsidika ny anay Website.
Sokajy Apps, Medical Tags Koronavilkku, Koronavilkku Apk, Koronavilkku App Post Fikarohana